November | 2019 | bishnunmdc
कालापानी सामाजिक सञ्जालमा सिमित नहोस
Posted on November 12, 2019 by bishnunmdc
नेपाल कमजोर, लोभी, नामर्द, भ्रष्ट सत्ताधारीको कारणले गर्दा भारतको पेलाई र मिचाईमा परेको हो । आफ्नो गल्ति स्वीकार नगरी अरुलाई गाली गर्नु पनि नार्मदीनै हो । स्वाभिमानी नेपाली माथि नेपाली सत्ताधारीकै कारणले छिमेकीले बारम्बार कोलमा पेलेझै पेल्दै आएको हो । साना छिमेकीलाई सिक्किमीकरण गर्नु भारतको नीतिनै हो । तुरुन्त त्यसो हुन नसकेमा सिमा मिच्ने, बाँध बनाएर डुबाउने, सिमाक्षेत्रका जनतालाई फसाउने वा पेल्ने वा फकाउने यो दक्षिणको नीति हो ।
नेपालको नीति के त ? सिमा अतिक्रमण, डुबान, असमान सन्धि, गण्डक, कोशी, महाकाली, र सम्पूर्ण सिमा क्षेत्रमा अतिक्रमण हुदा पनि भारत रिसाउछ र प्रधानमन्त्री बन्न पाईदैन भनेर नबोल्ने नीति लिएको होइनत ? अहिले सम्म त्यस्तै देखिएको छ । भारतले त आफनो काम गरिनै रहेको छ । वि.सं. २००७ साल पछि बनेका प्रधानमन्त्री वा सरकारले असमान सन्धी, भारतको पेलाई, मिचाई बारे कसैले प्रष्टसँग भारत समक्ष नेपाल र नेपाली जनताले भारतको कारण भोग्नु परेको पिडा बारे कुरा राखे त ? कसैले पनि राखेनन् । कसैले सामान्य कुरा उठाएका थिए भने तिनीहरु भारतबाट फर्के पछि सत्तामा रहेनन् । नेपालका सडकमा सत्तामा नपुञ्जेल विरोध गरे पनि सत्तामा पुगे पछि कसैले त्यसबारे ओठ खोलेनन् । त्यसैले पेलिने , मिचिने, थिचिने काम भईनै रह्यो, भईनै रहेछ र भविश्यमा पनि हुनेछ जवसम्म इमान्दारी बाँच्दैन ।
भारतको निर्भरतामा नेपाल परिनै रह्यो । आज पनि त्यस्तै छ । नाकावन्दी हुदामात्र राष्ट्रियता सुनामीजस्तो भएर उर्लन्छ । भारतले के के ललिपप दिन्छ सत्ताधारीहरु खान्छन् र नागरिकको राष्ट्रियता प्रतिको भावनामा बुटले कुल्चन्छन् । अनि देशलाई अरुले टोकेको टुलुटुलु हेर्छन् । आफ्नो सन्तानलाई डाक्टर र इन्जिनियरको कोटा पाए वापत हाम्रा नेता र ठूला कर्मचारी देशको सिमानै दिन पनि चुक्दैनन् । अनि भारतले नेपाललाई नपेलेर अरुलाई पेल्छ त ?
परिवेश फरक छ । अहिले पहिले सिक्किमलाई नीले जस्तो निल्न गाह्रो छ । ठूलो हुदैमा गोही हुन कोही पाईदैन ।
अहिले राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, र स्वाधिनताको ठूला र चर्का नारा दिने सत्तामा छन् । देश बेचेको आरोप लागेकाहरु पनि राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्दैछन् ।
सुघौली सन्धी नेपालको पक्षमा छैन । हाम्रो पक्षमा नहुदा नहुदै पनि नेपालको कमजोर सरकारले त्यसबारेमा केहि बोल्न सकेन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
सुघौली सन्धीकै समयमा पनि हामीले ठूलो भुभाग गुमाएका छौ । त्यो गुम्यो । तर कमसेकम सुघौली सन्धीमा उल्लेखित सिमालाईत बचाउन पर्यो नि । होईन र ? कि सुटुक्क दिई सकेका छौ सत्तामा बस्ने मध्ये कसैले, कुनै बेला ? कोशी, गण्डकी र महाकाली कसरी गरेका थियौँ ?
त्यो हो भने पनि भन साँचो कुरा नेपालीलाई ।
नारा, सामाजिक सञ्जाल, जुलुस एउटा आम नागरिकको धारणा हो । त्यसले बल दिन्छ लिन चाहेमा । आत्म विश्वास दिन्छ ग्रहण गर्न खोजेमा । त्यसले धारणा बनाउने मात्र हो । अन्यथा त्यसले ग्यास र पेट्रोल लुकाउनेलाई फाईदा पुग्ने मात्र हो । काम गर्नु पर्ने सरकारले हो । अब कमसेकम अहिले भूमी बचाउने विषयमा राष्ट्रिय एकता भएको बेला ठोस कदम छिटै चालिनु पर्यो । नेपालले तुरुन्त गर्नु पर्ने केहि काम मलाई लागेको यस प्रकार छन्ः
१. राजनैतिक र कुटनीतिक पहलः राजनैतिक र कुटनीतिक पहल तुरुन्त गरी तुरुन्तै कालापानी, सुस्ता, गण्डक, कोशी, महाकाली, मेची, सम्पूर्ण तराई , पूर्व र पश्चिम जहाँ जहाँ हाम्रो भूमी मिचीएको छ फिर्ता लिने, जहाँ भारतीय बस्ती बसाईएको छ त्यो हटाउने, जहा नेपाली भूमीमा भारतीय सेना राखिएको छ त्यो हटाउने । यो काम तुरुन्त शुरु गर्ने अन्यथा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे जस्तो हुने छ, त्यस्तो नहोस । नाकाबन्दीका बेला खुलेका उद्योग जस्तो नहोस । भारतले आफ्नो योजना अनुसार काम गरि सकेको छ । गरी रहेको छ ।
२.सिमा सुरक्षा दलः रात रह्यो अग्राख पलायो भन्ने कुरा विर्सन हुदैन । दीर्घकालिन नीति बनाएर अन्य देशले झैँ नेपालले पनि किन सिमा सुरक्षा बल नबनाउने । नेपालको चारैतिरको सिमामा सुरक्षा निकाय सिमा नजिक कहि पनि छैनन् जबकी भारत चीन लगायत सबै देशले सुरक्षा दल सिमा नजिक तैनाथ गरेका हुन्छन् । देशलाई राज्यले सुरक्षा दिएको छ भनि नागरिकलाई विश्वासमा लिन, भूमीको सुरक्षा गर्न पनि हरेक रणनैतिक सिमा क्षेत्रमा भारत र चीनलेझै सुरक्षा पोष्ट निर्माण गर्ने र त्यहाँ सुरक्षा निकाय राख्ने काम तुरुन्त गर्न पर्छ । विकट क्षेत्रमा बस्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो टोलीलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने ।
३. तारबार र नयाँ स्तम्भ निर्माणः नेपालले छिमेकी भारत र चीनसँग कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गरि चारैतिर तार बार वा नजिक नजिक हुने गरि पिलरको ब्यवस्था गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी त्यसबाट आर्जित रकम तारबारमा खर्च गर्ने । यसको लागि सरकारले रकम जुटाउन नसके नेपाली नागरिक बाट विशेष कर लिई तारवार र स्तम्भ बनाई सीमा सुरक्षा तत्काल गर्ने ,
४ स्वाभिमानको लागि उत्पादन. जवसम्म देशमा केहि क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान सहितको विशिष्ट उत्पादन हुदैन तवसम्म नत पहिचान नै हुन्छ न आर्थिक विकास । हामी विहान उने देखि राती सुत्ने बेलासम्म दाँतमाझने ब्रसदेखि तेल मसलासम्म विदेशबाटनै ल्याउछौ । सबै कुरामा भारत, चीन र अन्य मुलुकाबाट उत्पादित बस्तु प्रयोग गर्छौ । विदेशबाट ल्याईएका सवारीसाधनबाट प्रदुशित नेपाली अक्सिजन सायद नेपालको लिन्छौँ। त्यसबाहेक अरु केहि छैन । आफ्नो उत्पादन नभए पछि निरिह भईन्छ, अरुले हेप्छन र लछार्छन र पछार्छन जसरी सम्बिधान निर्माणमा पछारे , जसरी कालापानी, महाकाली, सुस्ता, कोशीमा पछारे । त्यसरीनै पछार्दैछन । त्यसकारण हाम्रो उत्पादन के त ? पहिचान हुने गरि उत्पादन तर्फ लाग्ने नीति लिने र त्यसकालागि सरकारले संरक्षण गरोस । खै अदुवा, अलैची, सुपारी, स्याउ र चियामा सुरक्षा दिएको ? भारतले भारतमा प्याज कम हुदा नेपालमा प्याज पैठारी रोक्छ भने हाम्रोमा कुनै उत्पादन छ भने त्यसको विस्तार गर्न नेपालले सुरक्षा दिन पर्छ कि पर्दैन । नेपालको स्याउ बजारमा आउदा अन्य देशको स्याउ निर्यात गर्दा बे विग्रन्छ र ? सरकारले उत्पादनमा विशेष पहल गर्ने । उत्पादितबस्तुको पूर्ण सुरक्षा दिने ।
५. आफ्नो थैली आफैले राम्रोसँग सुरक्षित राख्ने ः सिमा सुरक्षा र नियन्त्रण गरे पछि सरकारले एक वा दुई देशसँग मात्रको पर निर्भरता हटाउन आफनो उत्पादन पनि बढाउने र विभिन्न देशसँग ब्यापारिक, राजनैतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने ताकि एउटासँग मात्र भर पर्न नपरोस । आफनो थैली पनि बलियो होस ताकि कसैले सहजै हेप्न नसकोस ।
नेपालमा बलियो सरकार छ । त्यसको जनताले अनुभूत गरुन । सरकारले राष्ट्रहित, र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ र आम नागरिकको भावनाको उच्च सम्मान गर्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकले गर्न सकुन् । देशमा सरकार छ भन्ने नागरिकले अनुभूत गरुन् । अहिले देखिएको सिमा अतिक्रमणलाई सच्याईएको थाह पाउन् । यस्तो अतिक्रमण भविश्यमा हुने छैन भन्ने आधारको निर्माण भएको देख्न र अनुभव गर्न सकुन । शक्तिशाली सरकारले त्यति काम गर्नै पर्छ ।
मैले नेपालको विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गर्दा हाम्रो सिमा क्षेत्र लथालिङग भएको देखेको छु । राज्यको उपस्थिति नभएको देखेको छु । भोगेको छु । त्यो देख्दा कैयौँ स्थानमा घोप्टो परेर रोएको छु । त्यसबारेमा मैले यहाँ केहि लेखेको छैन ।